Umkhankaso weAlyzer: Ukulandela kunye nokuPhumeza iiPhulo zoHlahlolelo | Martech Zone
I-CampaignAlyzer: Ukulandela kunye nokuPhumeza iiPhulo zoHlahlelo
NgoMvulo, Oktobha 21, 2013 NgoLwesithathu, uDisemba 28, 2016 Douglas Karr
Njengoko bendilungiselela ukufundisa ikhosi nge Ukulinganisa imithombo yeendaba kwi-Web Analytics kule veki, isinqe soqeqesho besiphinda-sinika abazimase ngolwazi abanalo malunga nendlela yokumakisha ngokufanelekileyo amaphulo abo besebenzisa iwebhu kubahlalutyi isixhobo esinjengoGoogle Analytics. Ndihlala ndibhekisa ngqo kwi Umakhi we-URL woHlaziyo lukaGoogle -Kodwa iyandiphazamisa indlela esi sixhobo esingakhuselekanga ngayo ngokubhekisele kwinto iyonke kubahlalutyi Isicwangciso.
Imikhankaso ayisiyonto ilandelayo emva kokubonelela ngekhonkco ukukhuthaza umxholo wakho, isithembiso okanye umsitho. Kuya kufuneka ucwangcise ukuba ziyintoni na iithegi zakho, qinisekisa ukuba awunakuphindwa, kwaye ube nakho ukuzibeka esweni ngokulula. Luluvo lwam nje, kodwa xa ungena kwiGoogle Analytics kwaye uye kwiCandelo loMkhankaso, kuya kufuneka unikezwe ujongano olumnandi kanye apho olubonisa amaphulo akho kwaye lukuvumela ukongeza amaphulo.
Yiloo nto kanye Iphulo uAlyzer ugqibile. Iphulo Kuthatha umzuzu ukuseta iphulo elitsha, kwaye ungaqala ukuqhuba ukugcwala okufanelekileyo kwiwebhusayithi yakho ngendlela efanelekileyo. Sisisombululo somkhankaso wokuthengisa nge-agnostic-ukusebenza ngeGoogle Analytics, iWebtrends okanye iAdobe SiteCatalyst (iOmniture).
Ukufikeleleka lula I-CampaignAlyzer sisicelo esisekwe kwiwebhu esisebenza njengeqonga eliphambili lokugcina apho imibutho inokugcina amaxabiso ekhankaso yentengiso kwindawo yogcino lwedatha enye. Ngale ndlela, iiarhente zentengiso kunye nabathengisi bedijithali kwintlangano banokusebenzisana ekumakisheni imikhankaso eyahlukeneyo kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi, kunye nokuqinisekisa ukungqinelana kwiphulo lokumakisha.
Iingxelo zesiteshi -I-CampaignAlyzer iqinisekisa ukungqinelana kokumakisha ngokunika "indlela" yokumakisha imodeli kubasebenzisi besicelo. Abasebenzisi banokubhekisa ngokufanelekileyo amaxabiso angaphambili kunye namaphulo njengesikhokelo esizayo. I-CampaignAlyzer ikwaqinisekisa iingxelo ezicocekileyo zesitishi ngokunqanda abasebenzisi ukuba bacacise iindlela zokumakisha kwangaphambili. Ngabalawuli kuphela abanokufikelela kulungelelwaniso lwamajelo / uluhlu lwee-mediums.
Ukufikelela kwindima -I-CampaignAlyzer ivumela abanini-akhawunti kunye nabalawuli ukuba babeke ngokulula naliphi na inani labasebenzisi isicwangciso esikhethiweyo esivumayo kwaye sibanike amalungelo okufikelela kwiakhawunti. Abasebenzisi nokuba 1) ngabalawuli abanofikelelo olupheleleyo kuwo onke amaphulo kunye noseto lweakhawunti 2) abahleli abanokongeza, basuse kwaye bahlele amaphulo 3) okanye bafunde-kuphela abasebenzisi abanokujonga nje iingxelo.
Izichaso NgeCampaignAlyzer, abasebenzisi banakho ukubalula imikhankaso ukuze babhekise kuyo kwixesha elizayo kwaye bacacise imibuzo malunga nephulo. Izichazi zigcinwa kwindawo yethu yokugcina ulwazi, ke ngoko kukho ukufikelela okuvulekileyo kulo lonke ulwazi lwamva nje malunga nalo naliphi na iphulo.
Ityala le-URL emiselweyo -Iiparameter zomkhankaso zinokuza kumxube wecala eliphezulu nelisezantsi ngenxa yokungangqinelani kokumakisha kwengqungquthela. Oku kunokubangela ukuba utyelelo lusasazeke ngaphezulu kwamangenelo ahlukeneyo kwingxelo yemithombo yezendlela, eyenza ukuba uhlalutyo lube nzima ngakumbi. I-CampaignAlyzer ibonelela ngenketho yokunyanzela zonke iiparameter zephulo kwimeko encinci, ukudibanisa amangenelo nokwenza ingxelo ngokulula kunye nohlalutyo.
Ulawulo lwePhulo eliNinzi -Le nto iphambili iluncedo ngokukodwa kulawulo olukhulu lwephulo. Ngolawulo lwephulo elininzi, ungahambisa ngokulula amaphulo enziwe kusetyenziswa ezinye iinkqubo, ezinje ngeMicrosoft Excel okanye uGoogle amaXwebhu, kwaye ubangenise kwiCampaignAlyzer.
Ukukhuphela idatha -Imibutho inokufuna ukwabelana ngamaphulo kunye nee-URL ezimakishwe neearhente zomntu wesithathu, ngaphandle kokubanikeza ukufikelela kweso sixhobo. ICampaignAlyzer isombulula le ngxaki ngokubonelela ngeqonga lokuthumela ngaphandle imikhankaso kwi-Excel, CSV kunye neefayile ezimiselweyo zethebhu.
Imodeli yokuNikezelwa -Eminye imibutho ikhetha ukunika utshintsho lwayo kwi-Intanethi kwiphankaso yokuqala, endaweni yeyona yamva nje. I-Google Analytics, ngokungagqibekanga, ibonisa ukuguqulwa kwiphulo lakutshanje. ICampaignAlyzer ibonelela ngenketho yokulandela ukusetyenziswa kwayo nayiphi na imodeli. Ukuba kukhethwa imodeli yokuthinta umnxeba wokuqala, i-CampaignAlyzer iya kufaka "utm_nooverride = 1" umbuzo wombuzo ukuya esiphelweni sazo zonke ii-URLs ezimakishiweyo.
I-URL Shortener -I-CampaignAlyzer isebenzisa inkonzo yokunciphisa ye-URL kaGoogle [goo.gl] yokwabelana ngokulula kwe-URL kunye nokusasazwa kumajelo eendaba ezentlalo kunye nezinye iindlela zokuthengisa. Le nkonzo ibonelela ngenketho yokusebenzisa inguqulelo emfutshane yee-URLs zeendawo ezimiselweyo.
tags: Ukulandelela umkhankaso we-analyticsizichazi zomkhankasoukumakisha iphuloukulandelela umkhankasoUkulandela umkhankaso wephuloUkulandelela umkhankaso wesayithicatalystukumakishaUkulandelela umkhankaso wewebhu
Izibalo zeNtsebenzo yeNtengiso ezili-10 Ukwazi
IVevoCart: Iqonga elipheleleyo le-ASP.NET ye-Ecommerce Platform